Waa maxay faa iidooyinka ku jira isticmaalka koobka masturbay?
Koobka Diyaaraduhu waa badeecad jinsi oo caan ku ah ragga waxayna dabooli kartaa baahidooda siigaysashada. Laakiin dad aad iyo aad u tiro badan ayaa doonaya inay ogaadaan haddii ay wax u dhimeyso caafimaadka dadka? Qalabka loo isticmaalo in lagu sameeyo koobabka siigaysiga waxaa badanaa loogu talagalay silikoon caafimaad oo aan sun ahayn, oo leh jilicsanaan dhexdhexaad ah ...
Fasalka Jacaylka: Waa maxay ukun boodeysa?
Ukunta ka boodeysaa waa alaabo galmo siigaysasho dumar ah, waxyar oo qurux badan ayaa loo adeegsadaa ninka iyo naagta shukaansiga wax ku oolka ah. Ukunta ku boodka ah waxay leedahay shaqada gariirka, si markaa haweenku u sii wadaan orgaankooda. Waxay leedahay saameyn wanaagsan oo horumar ah oo ku saabsan daaweynta jahwareerka galmada dumarka, kacsiga la'aan iyo cuduro kale. ...
Qiyaastii 9 su'aalood oo caan ku ah waxyaabaha galmada lagu ciyaaro, Halkan ka hel jawaabo!
Alaabada galmada waa wax fiican oo ka caawiya ragga iyo dumarka inay si fiican ugu raaxaystaan ​​galmada. Qalabka galmada waa alaabta carruurtu ku ciyaaraan oo u oggolaanaya dadka inay ku raaxaystaan ​​orgaaniska iyo raaxaysiga, umana baahna inay ka xishoodaan wejiga la soo hordhigo, waa aalad caafimaad iyo raaxo leh. 1, sahayda galmada waxay sababi kartaa rabitaan la'aan galmada truth Runta: ...